हामी "चोर्नु" तपाईंको आफ्नै सामान्य चयापचय बारम्बार mindless आहार को जोखिम चलाउनुहोस्। मान्छे वजन भएका, एउटा तरिका वा अर्को, चयापचय विकार गर्छन। यो होता, र कसरी पुनर्स्थापना शरीर गरेको चयापचय?
बस कल्पना: एक व्यक्ति खाना धेरै खाने, तर यो अन्य पनि पहिलो भन्दा कम खाने छ बोसो प्राप्त गर्दैन, तर वजन गर्न सक्दैन। किन? चयापचय मा कुरा। उच्च यो छ (सक्रिय), को कठिन वजन बढाउनका र सजिलो गुमाउन छ एक व्यक्ति। संग कम चयापचय सबै ठीक विपरीत छ: डायल - गुमाउन कृपया वजन - कुनै पनि तरिकामा। तर किन को विफलता छ चयापचय?
तिनीहरूले गलत (अयोग्य) खान सुरु गर्दा सबैभन्दा मानिसहरू नाजुक ब्यालेन्स चयापचय गतिविधि गुमाउन। यो रकम समायोजन निम्नानुसार हुन्छ: प्राप्त ऊर्जा - यो खर्च, प्राप्त भएको छैन - लागत बचत। यो bystrousvaivayuschiesya कार्बोहाइड्रेट (मिठाई र पीठो उत्पादनहरु) खान बित्तिकै रूपमा, तपाईँले प्रविष्टि, छ, शारीरिक वा व्यायाम काम गर्न ऊर्जा खर्च गर्न आवश्यक भन्ने हो। हुन्छ कि घटना हुँदा पहिलो र दोस्रो कुनै पनि - बोसो रूपमा अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रह। घटनाहरूको उल्टो: एक व्यक्ति पर्याप्त energetically बहुमूल्य खाना र ऊर्जा खपत र, फलस्वरूप, यो उच्च लागि मांग खान्छ जब; यस मामला मा, छ वजन। दुवै अवस्थामा, त्यहाँ एक असंतुलन छ चयापचय प्रक्रियाहरू को शरीर मा।
कसरी पुनर्स्थापना आफ्नो चयापचय? शरीर बिताउनुहुन्छ रूपमा धेरै ऊर्जा खान भने यो पर्याप्त हुनेछ। के थप व्यावहारिक हुन सक्छ?! यो ग्याँस ट्यांक भरिएको छ जब तपाईं मिसिन अभ्क तेल हाल्नु छैन? त्यो तपाईंलाई थाहा गर्दा शारीरिक गतिविधि अपेक्षित छैन कि यो छ लायक छैन।
तर, चयापचय परिवर्तन गर्दा, यो कठिन हुनेछ बहाल। यो अन्त गर्न, सारा युद्घ सामांग्री संग राम्रो फिट। आफूलाई चयापचय पुनर्स्थापना गर्न आर्म आवश्यकता के हो?
आफ्नो पहिलो हतियार - एक अंश (सानो अंश मा) भोजन कम्तीमा पाँच वा एक दिन छ पटक। निस्सन्देह, यो तपाईं के खान महत्त्वपूर्ण छ। कार्बोहाइड्रेट को सीमा खपत (दिन अप "छिटो शर्करा" शरीर शारीरिक श्रम गर्न ऊर्जा आवश्यक गर्दैन जब)।
दोस्रो हतियार, त्यसैले, बोल्न "एक अतिरिक्त रिवल्वर" - प्रोटीन। खाना को सापेक्षिक रकम को वृद्धि र चयापचय "बाहिर रोल" आफ्नो शरीर मदत।
तेस्रो, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - शारीरिक गतिविधि।
आफ्नो शरीर पुनः प्राप्त गर्न मद्दत। उहाँलाई कसरी मालिश को मद्दतले चयापचय पुनर्स्थापना देखाउँछ। रगत प्रवाह massazhiruemyh ठाउँहरू सुधार, तपाईं ऊर्जा बोसो रिजर्व लागि रगत र व्यय बाहिर निस्कन मद्दत गर्नेछ।
तापमान को प्रभाव अन्तर्गत एक जीव को चयापचय कार्य, साथै गर्मी विनिमय को normalization को बहाली autonomic स्नायु प्रणाली व्यायाम को मतलब जहाँ बेकारी स्नान र साउना, देखेको छैन।
र अन्तिम - तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन प्रयास र अक्सर बाहिर जानुहोस्।
चयापचय को Normalization - लामो प्रक्रिया, तर धेरै इनामदायी। एक पटक चयापचय ब्यालेन्स पुनर्स्थापना, तपाईं सबै अतिरिक्त (वा हराएको) किलोग्राम बारेमा भूल हुनेछ। सर्वोत्कृष्ट, सामान्य कामकाज चयापचय तपाईं राम्रो आकार मा आफ्नो शरीर राख्न अनुमति छैन। तथापि, तपाईं चयापचय normalizing, तपाईं लगातार कुरा तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ कि लाग्छ भने, त्यसपछि तिमी गलत हो।
आफ्नो ऊर्जा खर्च अनुसार, राम्रो खाना: को स्तर मा यसलाई राख्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि को प्रश्न तपाईं एक foregone निष्कर्षमा हुनेछ र तपाईं फेरि कहिल्यै तिनीहरूलाई एक आश्चर्य हुनेछ लागि आज "कसरी चयापचय पुनर्स्थापना"।
कलाई - फुलेको कि र के गर्न?
कमजोरी, वाकवाकी, चक्कर आना। के रोग यी लक्षण संकेत गर्न सक्छौं?
Speleotherapy - यो के हो? Speleotherapy: contraindications र समीक्षा
छोराछोरीको Adenoids: लोक उपचार र आधुनिक प्रविधिको उपचार
"बीलाईन" रोमिङ अब्खाजिया मा: वर्णन, दर र समीक्षा
होटल "पिताजी" (अब्खाजिया, Gudauta): कोठा को विवरण, समीक्षा